Fampianarana: Ivon'ny fampandrosoana, atao mifanentana amin'ny filan'ny Faritra tsirairay
mercredi, 30 mai 2018 15:14
Miainga amin'ny Tokantrano ny fototry ny fiarahamonina. Ao no misy ny fanabeazana ny ankizy, ny tanora.
Tsy misaraka aminy arak'izany ny tontolo manodidina azy, ny fomba, ny teniny ary ny fandrosoan'ny Faritra misy azy.
Ny sekoly dia toerana fanabeazana, izay manampy ny efa ataon'ny Ray amandreny any an-tokantrano. Toerana fandratoana fahaizana sy fianarana ho entina mampandroso ny fiarahamonina izay misy ny tena.
Entina miasa hamokarana sy hampitombo ny fiarian-karenan'ny tsirairay sy ny Faritra ary ny Firenena.
Manana adidy lehibe ammin'ny fanabeazana arak'izany ireo Ray aman-dreny, ireo Fiangonana, ireo fikambanana sy ireo sehatr'asa mitaiza ankizy sy tanora ary ny fanjakana izay tompon'andraikitra feno amin'ny fanabeazana sy fampianarana ny zaza sy ny tanora ary ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra, mba ananana olom-banona sy mahay eo anivon'ny fiarahamonina.
Ahafahana mamokatra tsara, dia mila olona mahay ireo sampan-draharaham-panjakana isa-tsokajiny, ireo orin'asa miankina na tsy miankina amin'ny Fanjakana.
Tsy asa sosialy fotsiny izany ny Sekoly fihofanana sy ny fampianarana, fa sehatra ihorenan'ny toe-karena, investissement. Izany hoe fampiasam-bola, ka misy vola atokana amin'ny fampianarana sy fiofanana, ka misy vokatra andrasana mba hampitombo izany vola nampiasaina izany.
Tsy andany vola fotsiny ho an'ny fampianarana izany ny Ray amandreny sy ny fanjakana satria hoe mila mianatra fotsiny ny zaza.
Midika izany fa ny vola lany rehetra amin'ny fampianaran-janaka, dia tokony hiverina ary hisy tombony rehefa hiasa ilay tanora. Izany hoe mifanentana amin'ny vola sy fotoana ary ny ezaka nataony nianatra, ny vola na karama ho azony rahatr'izay hiasa izy.
Noho izany dia tsy misaraka ny fampianarana, fiofanana ary ny ASA sy ny Orin'asa.
Rehefa miresaka fampianarana, dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ny sekoly hianarana miaraka amin'ireo fitaovana rehetra ilaina amin'izany, ny mpampianatra, ny mpandraharaha, ary ny fanofanana ireo mpampianatra.
Ao koa ny programam-pampianarana sy ny fanadinana ary ny diplôma mifandraika amin'izany.
Anisan'ny azo antsaina ihany koa ny tetiandrom-pampianarana, ny vancances...
Ary tsy latsadanja ny hoe atao ahoana ireo ankizy na tanora amin'ny safidy sehatr'asa tiany atao, na ny orientation.
Eo koa no mipetraka ny hoe, atao ahoana ireo zaza na tanora tsy tafita amin'ny dingana ambony, sortie et echec scolaire.
Tsy hiditra amin'ny antsipirihany amin'ny taona ianarana isan'ambaratongany isika, na ny karazam-piofanana toy ny LMD, apetratsika eo amin'ireo mpampianatra manam-pahaizana momba izany ny antsipirihany.
Ny tetik'asa "Vitatsika io", dia hizara telo lehibe ny fampianarana:
1- Ambaratonga voalohany:
Manomboka amin'ny pré-scolaire ka hatramin'ny classe de 3ème. Foanana ny CEPE, mety fanadinana fitsapana no atao hanazarana azy hiatrika olana sy famahana olana. Evaluation sy contrôle continu no tena hiasa fa tsy ilay examen loatra, satria mety misy ny fahavoazany amin'iny, nefa mpianatra mahay andavan'andro. Tsy ny note no zava-dehibe fa ny fahaizana sy fifehezana ny taranja.
2- Ambaratonga faharoa:
Izay afaka BEPC rehetra dia afaka miditra eny amin'ny Lycée, fa tsy concours hafa ny seconde. Zon'ny rehetra ny mianatra rehefa afaka izy. Anjaran'ny fanjakana ny manao ny sekoly ahafahan'ny rehetra manohy ny fianarana.
3- Ambaratonga ambony:
Izay afaka Bac rehetra dia afaka manohy eny amin'ny anjerimanontolo maimaimpoana, tsy misy sivana, fa miankina amin'ny lalam-piofanana nataony.
Ny sekoly manokana, toy ny médecine, Agro, Polytechnique, Droit ihany no misy fifaninana, ankoatr'izay dia tsy misy sivana. Nampidirana hisy fifaninana eto ny Droit, satria lasa sampam-pianarana fiheren'ny tsy tafita etsy sy eroa fotsiny.
Indroa ihany ny redoublement ekena, ary mifindra filière indroa ihany. Hisy base dedonnée itambarana ireo Onivesrité 3 lehibe ireo, ka tsy hoe hitety ny oniversité rehetra eto Madagasikara rehefa tsy tafita, fa indroa ihany. Mandeha miasa na manao Service National izay voaroaka.
06/20 ny note éliminatoire amin'ny filière rehetra. Izay latsak'izay dia voaroka.
Miainga amin'ny zaza 3 taona ny fampianarana, ary tsy maintsy mandeha mianatra avokoa ka hatramin'ny faha 16 taonany.
Tsy misy mahazo mampiasa zaza na tanora latsaky ny 16 taona.
Iantohan'ny fanjakana avokoa ny fampianarana rehetra, na ny fitaovana fototra, kit scolaire, na ny cantine scolaire, na ny transport scolaire, na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana dia mahazo avokoa.
Ny mpianatra rehetra manaraka ny fiofanana arakasa, formation professionnelle rehetra, na ny mpianatra eny amin'ny oniversité dia mahazo vatsimpianarana na bourse avokoa.
- Bourse universitaire et scolaire:
Tsy maintsy manao stage en Entreprise ny mpianatra rehetra.
- Mpampianatra sy Mpanabe ary Mpandraharaha
Hisy sekoly ambony isaky ny Faritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo ajoro hanofanana ireo Mpampianatra sy Mpanabe.
Hisy ireo fampihofanana mitohy, formation continue, mba hifanentana amin'ny toe-trandro ny fahaizana ampitaina.
Hikarama toy ny mpiasam-panjakana avokoa ny Mpampianatra, na miankina na tsy miankina amin'ny Fanjakana.
Tafiditra ao anatin'ny mpanabe ny mpitondra fivavahana, mopera, pastera, dekaonina, masera, mpitarika fikambanana sport sy mpitaiza.
Ho faritana tsara kosa ny afaka manangana Fiangonana fa tsy ho lasa fiherana fanambakana sy fitadiavam-bola fisolokiana fotsiny. Fa tena sehatra hitaizana ny tanora. Akatona ireo secte mpisoloky mameno ny tanàna.
Ny sekolim-pinoana dia tsy mihoatra ny 20% amin'ny programa sy ny fotoana ampianarany ny resaka fampianarana finoana ao aminy. Sokajiana efa Fiangonana izy amin'izay fa tsy sekoly intsony raha mihoatra an'izay.
Base, miampy 10% toy ny mpiasam-panjakana, mahazo trano, ary hiantohana tanteraka ny fahasalamana na pubic na privé.
Bac+3 miakatra: 1 000 000 Ariary/mois +10%
Bac - Bac+3: 500 000 Ariary/mois +10%
Tsy toerana fitadiavam-bola ny sekoly, ka ho entitra ny fanomezan-dalana.
Ho jerena ny fotodrafitrasa, faritana ny velaran'ny efitrano fianarana isaky ny mpianatra, ary ny velaran'ny tokotany hilalaovana sy hanaovana fanatanjahantena.
Ny sekoly tsy misy tokotany arak'izany dia tsy ho ekena intsony, ireo sekoly efa misy amin'izao nefa tsy mahafeno ny fepetra dia iarahana mijery ny amindrana azy toeran-kafa sy anampiana ny tompon'ny sekoly. Ireo tsy ara-dalana rehetra dia hakatona.
Tsy maintsy olona voahofana ambony vao afaka manokatra sekoly, jerena ireo mpampianatra eny amin'ny Oniversité-mpanjakana izay manana sekoly mba tsy hampirafy izany amin'ny Oniversité, ka lasa ambin-javatra ny fampianarana eny amin'ny Ambaratonga ambony.
Hisy teti-bola omen'ny fanjakana ny sekoly tsirairay, isaky ny isan'ny mpianatra, ka raha mihena ny isan'ny mpianatra, dia mihena arak'izay koa ny famatsiam-bola omenan'ny fanjakana ilay sekoly. Mitovy na ny sekoly tsy miankina, na ny sekolim-panjakana dia samy mahazo avokoa, ny sekolim-panjakana no mahazo 20% amboniny.
Asiana barême ny écolage alain'ny privé, izay hijerena ny tolotra omena sy ny vola takiana. Izany hoe métier reglementé no isokajiana ny fampianarana, service public io fa mahazo misehatra aminy ny privé.
Tsy ekena ny mpampianatra manao fitadiavam-bola amin'ny fampianarana toy ireny varotra polycopie ireny.
Omena toerana lehibe ny teknolojia amin'ny fampianarana.
Ampiana ihany koa ireny fampianarana alavitra ireny, enseignement à distance.
Ampidirina ao anatin'ny contrat de licence d'exploitation téléphonie mobile et internet ny famatsiana internet maimaimpoana ny sekoly rehetra manerana ny nosy. Mifampintsinjara arak'izany ireo fournisseur.
Atao ao anaty Kit scolaire Ambaratonga voalohany ny ordi natokana ho an'ny ankizy, Pad na tablette ho an'ny Ambaratonga faharoa, ary ordi ho an'ny ambaratonga ambony.
- Hisy fananganana Université lehibe isaky ny Faritra 3, Avaratra, Afovoany, Atsimo, hisy trano hipetrahan'ny mpampianatra, hipetrahan'ny mpandraharaha, ary hipetrahan'ny mpianatra. Hisy internet gratuit ny sekoly sy ny efitrano rehetra.
Misy hofa-trano fandraisana anjara amin'izany, samy hanana ny efitranony 9-12m².
Hisy ny Cantine scolaire, izay tsy azo entina mody ny sakafo.
- Mahazo vary 30kg isam-bolana, ny mpianatra mitokan-trano rehetra tsy mipetraka amin'ny campus universitaire, atao ao anatin'ilay carte électronique misolo ny vola, iadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy hifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny inflation.
Isaky ny Faritra (3) no hamaritra ny programam-pampianarana izay mifanentana amin'ny filan'ny Faritra, na ny orin'asa ananany, na ny harena trandrahana ao amin'ilay Faritra.
Ny Faritra ihany koa no hamaritra ny tetiandrom-pampianarana, tsy voatery hitovy izany ny vancances.
Samy manana ny azy arak'izany ny Baccalauréat, saingy mitovy hasina kosa ny Baccalauréat eo amin'ny sehatra nasionaly. Hisy fiaraha-miasa izany ireo Oniversité 3 lehibe ireo andrindra ny fitovian-danjan'ny diplôma.
Raha afaka Bac any amin'ny Faritra Atsimo izany, nefa te hanohy fianarana any Avaratra, dia mitovy ny lanjan'ny diplôma, afaka mianatra any Avaratra.
Misy ireo taranja sy programa hitovizana, ary misy kosa ny spécialisation apetraky ny isam-paritra.
Anisan'ny itovizana ny fianarana ny taranja Malagasy hatrany amin'ny Oniversité na inona na inona lalam-pihofanana, ny taranja Tantara Jeografian'ny Madagasikara, ny Education civique, ny Education sexuelle, ary ny Code de la route, na lalàna mifehy ny fifamoivoizana, izay lalàna ampiasaina isan'andro, na ho an'ny mpandeha an-tongotra, na an'ny bisikileta sy moto, na sarety na fiarakodia, nefa dia hitsakitsahana tsy misy mpanaja.
- Ny Teny enti-mampianatra:
Mametraka olana foana izy io, satria raha miara-manaiky ny rehetra fa ny teny Malagasy no teny entina mampianatra, dia misedra olana goavana, satria ny boky rehetra dia mbola amin'ny teny frantsay no betsaka, ny fampianarana eny amin'ny oniversité dia teny frantsay avokoa, ny fanofanana ireo mpampianatra dia torak'izany.
Nefa dia sady tsy voafehy ny teny Malagasy, na ny voambolana ampasaina, na ny fomba enti-mampianatra, nefa tsy voafehy ihany koa ny teny vahiny.
Noho izany dia atao tanjona anatin'ny 5 taona ny hirosoana amin'ny fampianarana amin'ny teny Malagasy, ka miainga amin'ny fanovana ny hoe, ny Teny Malagasy ihany no teny ampiasaina, na eo amin'ny raharam-panjakana, administration, na eo amin'ny fanaovan-dalàna, texte de loi, na eo amin'ny didim-pitsarana, na ny eo amin'ny fanofanana eny amin'ny anjerimanontolo.
Esorina anaty Lalampanorenana ny filazana fa anisan'ny teny ampiasaina ofisialy ny teny frantsay (art-4). Atao mazava fa ny teny Malagasy no hany teny ofisialy eto Madagaikara.
Azo ampiasaina amin'ny fampianarana sientifika kosa ny teny vahiny arak'izay ilana azy. Ny filière tourisme ohatra, mety ny teny sinoa, angilisy ary arabo no mety ilaina kokoa, ny teny frantsay mety amin'ny sehatra hafano ampiasana azy.
Avondrona arak'izany ary vatsiana vola ny Akademia Malagasy sy ireo mpikaroka momba ny teny Malagasy sy ny tenim-paritra mba hiavao ny teny Malagasy Ofisialy ka ampifandanjana ny tenim-paritra rehetra.
Atao programa manokana mihitsy ny fanaovana ny lalàna rehetra amin'ny teny Malagasy, mbola hiverenantsika moa izy ity rehefa miresaka ny asam-pitsarana, izay mila avaozina ihany koa ny Fitsarana sy ny lalàna rehetra eto amintsika.
- Ny fomba fiasantsika moa raha ny tetibola dia:
Ka noho izany dia isaky ny
* Fokontany, 20 000, dia tsy maintsy misy Ambaratonga voalohany (pré-scolaire - 3ème)
* Kaominina, 1 600, dia tsy maintsy misy Ambaratonga faharoa, 2nd - Terminal
* Faritra, Oniversité 3 lehibe.
Ireo Oniversité efa misy amin'izao amin'ny Faritany 6 dia ho avaozina sy hatsaraina avokoa, na ny sekoly ianarana, na ny trano honenana ho an'ny mpianatra, mpampianatra, mpandraharaha. Ho eo ambany fiadidian'ireo Oniveristé 3 eo anivon'ny Faritra ireo izy 6 ireo, arakaraky ny toerana misy azy.
Faritra Avaratra: Oniversité Antsiranana sy Mahajanga
Faritra Afovoany: Oniversité Antananarivo sy Toamasina
Faritra Atsimo: Oniversité Fianarantsoa sy Toliara.
Tsy azo ekena intsony eny amin'ny oniversité ny fidiran'ny politika na ny fikambanan-drazana, association régionale na fihaviana ...
Tsy ny mpianatra no mibaiko, na manan-jo aza izy, averina ny discipline, ary apetraka ny franchise universitaire, izay toerana azo iresahina sy hieritreretana, na ny tsy takatry ny sain'ny fiarahamonina aza. Misy kosa ny éthique hajaina, indrindra eo amin'ny sehatry ny fikarohana.
Omen-danja ireo fikarohana ilaina eo amin'ny Faritra.
Ireo mémoire rehetra dia tsy maintsy iarahana amin'ny orin'asa privé na ny fanjakana avokoa, ireo fikarohana ataon'ny mpianatra sy mpampianatra dia vatsiana vola ny anantaterahina azy miaraka amin'ireo orin'asa privé.
Rehefa tonga ny grandes vancances dia miala amin'ny trano avokoa ny mpianatra, ary manefa izay nosombainy. Mahazo Réquisition transport izy mody any amin'ny faritra misy ny Ray aman-dreniny.
Ireo mahazo bourse dia manao engagement décennal, manaiky hiasa ho an'ny Fanjakana mandritra ny 10 taona.
Mahazo bourse ihany koa ireo mpianatra any amin'ny Université Privé.
Mahazo fanampiana ara-bola isaky ny mpianatra ny Université privé.
Eo amin'ny 10 milliards de dollars ny vola entina anorenana foto-drafitr'asa, sekoly sy fampitaovana.
Ny fanjakana no niantoka ny fanofanana manam-pahaizana ho an'ny orin'asa na miankina na tsy miankina, ka amin'ny maha investissement fampiasana vola azy, dia mandray anjara amin'izay izany ny orin'asa izay ahazo tombony, tolorana manam-pahaizana.
Hisy hetra 2% izany amin'ny karaman'ny mpiasa alaina amin'ny mpampiasa andoavana ny saram-panofanana.
Raha tsiahivina dia 1% amin'ny karaman'ny mpiasa no aloan'ny mpiasa amin'ny resaka fahasalamana, ary 5% no aloan'ny mpampiasa amin'izao, ankoatran'ny CNAPS.
Nahidina ho 3% ny an'ny mpampiasa amin'ny resaka fahasalamana, fa ilay 2% izany alaina amin'ny mpampiasa ihany hamatsiana ny fanofanana ny mpiasa.
Ka raha 8 000 000 ny isan'ny olana miasa, na privé, na fanjakana, na Service national, ka raisina fotsiny ilay karama farany ambany 200 000 Ariary omena ny Service National, dia 1 600 miliara Ariary isam-bolana na 19 200 miliara Ariary isan-taona, izany ny masse salariale, na ny vola karama eto amin'ny Firenena. Na 1,280 milliards de dollars. Ny 2% n'io izany 25 600 000 de dollars.
Io izany no fenoan'ny fanjakana ho 30 millions de dollars, ka samy ahazo 10 millions de dollars na 30 miliara Ariary, 150 milliard Fmg ho fampandehanana ny fampianarana fanofanana arak'asa, lycée professionnel sy eny amin'ny oniversité isaky ny Faritra 3.
Raisain'ny tetibolam-pokontany ny sekoly Ambaratonga voalohany, an'ny tetibola Kaominina ny Ambaratonga faharoa, ary ny Faritra ny Oniversité.
Ny Foibe no hiantoka sy hisahana ny fotodrafitrasa rehetra.
Ny amaranako azy, hoy Mao Tsé-Tung: "Tsy misy mpianatra dondrona, fa ny mpampianatra no tsy mahay", ka arak'izany dia hiantefa betsaka amin'ny fanofanana ny mpampianatra sy ny fijerena ny antom-piveloman'izy ireo ary fanatsarana ny toerana hiasany sy ny hasin'izay ireo no andraikitra goavana raisin'ny tetik'asa "Vitatsika io" rehefa lany Filoham-pirenena.